कोरोना महामारी रोक्न भ्याक्सिन अपरिहार्य : नगरप्रमुख चन्द - Morning Bell
कोरोना महामारी रोक्न भ्याक्सिन अपरिहार्य : नगरप्रमुख चन्द
रक्षा बागचन	धनगढी	जेठ १३, २०७८
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)संग अहिले विश्व जुझिरहेको छ । कोरोनाको दोस्रो भेरिन्टसंग नेपाल पनि नराम्रोसंग प्रभावित बनेको छ । जसको रोकथाम र नियन्त्रणका लािग तीनवटै तहका सरकार आ–आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय भएर लागिरहेका छन् । महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । यसैक्रममा ‘कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकार’ अन्तर्गतको आठौं अंकमा हामीले कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार चन्दसंग मर्निङ बेलका रक्षा बागचनले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंक :
बेदकोट नगरपालिकाको छोटो परिचय दिनुस न, कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ नगरपालिकालाई ?
बेदकोट नगरपालिका नयाँ नगरपालिका हो । यो १५८ बर्ग किलामिटरमा फैलिएको छ । हामीले नगरपालिकाको विकासका लागि एउटा प्लानिङ गरेका थियौं सुरुका वर्षदेखि नै । त्यो प्लानिङ अन्तर्गत अहिले काम भइरहेको छ । नगर का २१ वटा ठूला योजना र केही साना योजनाहरुमा काम गरिरहेका छौं । यो क्षेत्रमा बेदकोटलगायत लिङ्गेश्वर, सरोवर ताल बाल्मिकी क्षेत्र भएकाले पर्यापर्यटक क्षेत्रकारुपमा विकास गर्न लागिरहेका छौं । एक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने संघीय सरकारको नीतिगत निर्णय अनुसार बेदकोट नगरपालिकाको वार्ड न.२ र लिक्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने हेतुले काम अगाडि बढाएका छौं । प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको सिलान्यास गरिएको छ । हामीले यसलाई औद्योगिक नगरकारुपमा चिनाउन खोजेका छौं ।
“लकडाउन सुरु हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै नगरबासीलाई पनि बैवाहिक, सास्कृतिक धार्मिक समारोहमा १५ जना भन्दा बढी जमघट हुन नदिन निर्देशन दिएका थियौं । कोभिड नियन्त्रणका लागि वडास्तरीय समिति बनाएका छौं ।”
बेदकोटमा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ?
बेदकोट नगरपालिकामा पनि कोरोना संक्रमण फैलिएकै छ । हालसम्म ४७९ नमुना परीक्षणमा १३९ पीसीआर र ३६० जनाको एन्टिजेन टेस्ट गरेका छौं । ४६ जनाको पीसीआर पोजेटिभ एन्टिजेन पोजेटिभ १०७ जनाको आएको छ ।
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि के गरिरहेको छ नगरपालिकाले ?
भारत र विदेशबाट आउनेहरुको तथ्याङ्क लिइरहेका छौं । उहाँहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छौं । यहाँ रहेका नागरीकहरुको पनि परीक्षण गरिरहेका छौं । पोजेटिभ देखिएकाहरुका लागि औषधिको पनि व्यवस्था गरेका छौं । गम्भीर विरामीलाई हस्पिटल जान निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं । अक्सिजन दिनु पर्ने भए हस्पिटलसंग समन्वय गरेर व्यवस्था गरेका छौं । आइसीयू आवश्यकता भएकालाई आइसीयूको पनि व्यवस्था गरेका छौं । नागरिकहरुले रोग भएपनि लुकाएर नजिकको मेडिकलबाट औषधी ल्याएर खाने गरेको पाएकाले सचेतना अभियान चलाएका छौं । लकडाउन सुरु हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै नगरबासीलाई पनि बैवाहिक, सास्कृतिक धार्मिक समारोहमा १५ जना भन्दा बढी जमघट हुन नदिन निर्देशन दिएका थियौं । कोभिड नियन्त्रणका लागि वडास्तरीय समिति बनाएका छौं । नगरस्तरमा पनि राजनीतिक दल, संघ–सस्था नागरीक समाजले स्वस्फूर्त रुपमा सहयोग गरिहनुभएको छ । अब दुई/तीन दिन भित्र कोभिड अस्पताल संचालन गर्न सम्पूर्ण तयारी गरिरहेका छौं । अक्सिजनको अभाव हुन नदिन नेपालगञ्जलगायतका स्थानबाट खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अहिलेसम्म हामीले कोरोना रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा सकेजति गरिरहेका छौं ।
नगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्थाहरुको अवस्था के छ ?
बेदकोट नगरपालिकाका सबै वडामा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण गरिसकेका छौं । हामीले त्यहा तीन वर्ष पहिले नै स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराएका थियौं । स्वास्थ्यकर्मी नभए पनि नगरपालिकाबाटै दरबन्दी व्यवस्था गरि नियुक्त गरेका छौं । हामीसंग दुईवटा स्वास्थ्यचौकी रहेका छन् । सबै वडामा स्वास्थ्यकर्मी मार्फत सेवा दिइरहेका छौं । केही वडामा स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएकाले स्वास्थ्य सेवा स्थगित गरेका छौं । बेदकोट प्राविमा पहिले देखिनै आइसोलेसन निर्माण गरेका छौं । यहाँ ५० जनासम्म रहने व्यवस्था गरेका छौं ।
“मुख्य भनेको भ्याक्सिननै हो । यो नै दिर्घकालिन उपाय हो । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग सहयोग माग्ने र आफ्ना स्रोत साधनको सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटको २५ प्रतिशत भए पनि भ्याक्सिनलाई दिनुपर्छ ।”
अक्सिजनको उपलब्धता के छ ?
अक्सिजनको सबै भन्दा ठूलो समस्या छ । नेपालगञ्जबाट अक्सिजन ल्याउने पहल गरेका छौं । यहाँ पनि सिलिण्डर संकलन गर्ने कार्य अगाडि बढाएका छौं ।
कोभिडका गम्भीर बिरामलिाई अन्यत्र रिफर गर्नुपरे कसरी र कहाँ गर्नु हुन्छ ?
कोभिडका गम्भीर विरामीलाई हामीले अहिले पठाउने भनेको महाकाली र सेती प्रादेशिक अस्पताल नै हो । यहाँ जानको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं । त्यहाँबाट पनि अन्यत्रै लग्न पर्ने भए एम्बुलेन्सको व्यवस्था हामीले नै गर्छाैं । कसैको आर्थिक अवस्था राम्रो छ भने हेलिकप्टरबाट जान चाहनेका लागि कोर्डिनेसन हामी गरिदिन्छौं ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कस्तो रणनीति अपनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
कोरोनाको प्रभाव कम गर्न भ्याक्सिनको अपरिहार्यता देखिन्छ । तेस्रो भेरियन्ट पनि देखिएको कुरा व्यापकरुपमा समाचारमा आएको छ । पहिलो लहर आउँदा अक्सिजनको त्यति आवश्यकता थिएन अहिले अत्याधिक छ । भोलि आईसीयू र भेन्टिलेटरको हुन सक्छ । यसका लागि हामीसंग तयारी हुनुपर्छ । मुख्य भनेको भ्याक्सिननै हो । यो नै दिर्घकालिन उपाय हो । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग सहयोग माग्ने र आफ्ना स्रोत साधनको सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटको २५ प्रतिशत भए पनि भ्याक्सिनलाई दिनुपर्छ ।
नगरपालिकामा अहिलेसम्म कति जनताले भ्याक्सिन लगाएका छन् ?
हाम्रो नगरपालिकामा हामीले खास गरि स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकता दियौं । त्यसपछि ६५ वर्ष भन्दा माथिकालाई भ्याक्सिन दिने कुरा थियो । हामीले ५५ वर्ष माथिका सबैलाई भ्याक्सिन लगाएका छौं । विभिन्न कारणबाट चार÷पाँच प्रतिशत छुटेका हुन सक्छन् । मलाई लाग्छ बेदकोट नगरपालिकामा ३० प्रतिशत जतिलाई भ्याक्सिन लगाइएको छ ।
सम्पूर्ण नगरबासीले कहिलेसम्म भ्याक्सिन लगाउन पाउछन् ? के छ यहाँहरुको योजना ?
सम्पूर्ण नगरबासीलाई भ्याक्सिन लगाउने योजना हाम्रो भन्दा पनि संघीय सरकारमा निर्भर रहन्छ । संघीय सरकारले यस विषयमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने देख्छु । कतिपय कुरा श्रोत भएर मात्र पनि हुदैन । नीति र माध्यम चाहिन्छ । जस्तै कि अहिले भारतमा लकडाउन भएका कारण चाहेर पनि अक्सिजन ल्याउन सक्दैनौं । कतिपय कुराहरु कुटनीतिसंग सम्बन्ध राख्छन् । संघीय सरकारले नै भ्याक्सिन रणनीति बनाउन पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संघीय सरकारबाट सही र इमान्दार पहल भएमा असार मसान्तसम्म पालिकाका सबै नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
भारतलगायत अन्य मुलुकबाट नगरमा भित्रिएका व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु भएको छ ?
विगतमा हामीले २१ वटा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेका थियौं । सोचेजस्तो सुविधा दिन सकेनौ होला । खाना शौचालय इत्यादी कुरालाई लिएर जनतामा असन्तुष्टि देखियो । उहाँहरुले होम क्वारेन्टाइन मै बस्ने इच्छा गरेको पाइयो । त्यसैले यस पटक क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छैनौं । संक्रमितहरु होम आइसोलेसनमै बसिरहेका छन् ।
होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिलाई कसरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहनु भएको छ ?
प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र रहेका छन् । आइसोलेसनमा बसेकाहरुले उहाँहरुबाट सेवा लिइरहनु भएको बछ । आइसोलेसनमा बसेकाहरुसंग जनप्रतिनिधि, स्वयमसेवीका, राजनीतिक दलका नेता सबै निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु मार्फत हामीलाई खबर आएपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई नै पठाएर स्वास्थ्य जाँचलगायत जटिलता भए हस्पिटल पठाउने हामीले गरेका छौं । एम्बुलेन्सको निःशुल्क व्यवस्था गरेका छौं । हस्पिटल पुगेपछि बेड व्यवस्था गर्नेदेखि अन्य सेवाहरुका लागि समन्वय हामीले नै गर्दै आएका छौं ।
संक्रमण थप नफैलियोस भन्नका लागि नगरपालिकाले के गरेरिरहेको छ ?
संक्रमण नफैलियोस भन्नका लकागि मुख्यतया जनचेतना मुख्य हुन्छ । अहिले पनि हाम्रो समाजमा पीसीआर टेस्ट गर्न एक प्रकारको हेजिटेन्सी छ । परिवारको एउटा व्यक्तिलाई पोजेटिभ देखिन्छ त्यस्तै लक्षण भएका अन्य सदस्य पीसीआर टेस्ट गर्न मान्दैनन् । यो विडम्बना हो । रोग लुकायो भने आफू मात्र नभई पुरै समूदायको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने कर्तव्य बोध हुन जरुरी भएको छ । समयमा उपचार गर्यो भने ज्यान जोगिन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । एन्टिजेन टेस्टको दायरा बढाउनुपर्ने देख्दछु । टाइफाइड र रुघा खोकी हो भनेर औषधि खाँदै घर बसेको पाएका छौं । सबैलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।
महामारीमा सही सूचना प्रवाह निक्कै महत्वपूर्ण हुन्छ । जनतामा सूचनाले त्रास नफैलियोस भन्नका लागि के गरिरहनु भएको छ ?
सूचना प्रवाहको लागि वडा कार्यालय, नपाको स्वास्थ्य शाखा, सूचना शाखा रहेको छ । यहीबाट सही सूचना प्रवाह भइरहन्छ । एफएम र टेलिभिजन मार्फत कोभिड सम्बन्धी सूचना र संदेशहरु प्रसारण गर्ने गरेका छौं । सामाजिक संजालको पनि प्रयोग गरेका छौं ।
कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुका लागि खाद्यान्न र राहातको यवस्था गर्नुभएको छ ?
गत बर्ष ३ हजार ५०० घर परिवारलाई राहात वितरण गरेका थियौं । यो वर्ष कोभिडको दोस्रो लहरले मानिसहरु त्रसित भएको अवस्था छ । हाल राहतमा भन्दा कोभिड नियन्त्रणमै सबैको चिन्ता र चाँसो रहेको छ । हाम्रो सामाजिक संरचना पनि यस्तो छ कि कमजोर अवस्था भएकालाई छरछिमेकले सहयोग गर्ने चलन छ । यो सद्भाव अहिले पनि कायम छ । तर लकडाउन बढ्दै जाँदा आवश्यक परेमा हामी राहतको व्यवस्था अवस्य गर्छौं । गहुँ बाली भर्खरै भित्राएका कारण पनि एक÷डेढ महिनाका लागि प्रायः सबैले जोहो गरेका हुन्छन् । तर जो सुकुम्बासी छन्, मजदुर छन्, डेरामा बस्छन् उनीहरुको लागि पहिलो चरणमा हामी सहयोग गर्छौ । राहतका लागि हामीले बजेट बिनियोजन गरिसकेका छौं ।
अहिले नगरपालिकाको मुख्य चुनौती चाँही के हो ?
नगरपालिकाको मुख्य चुनौती भनेको कोभिडको लहरलाई रोकथाम गर्न र उपचार गर्नु नै रहेको छ । हस्पिटल खोलेका छौं । पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि डाक्टर आउन मान्दैनन् । स्वास्थ्यकर्मी पाइँदैनन् । आउन पनि मान्दैनन् । हामीसंग भएका स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर काम गर्दै आउनु भएको छ । जसको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ । अक्सिजनको आपूर्ति, गम्भीर विरामीलाई कसरी समयमै उपचार पुर्याउने हाम्रा प्रमुख चुनौती रहेको छ ।
अन्तमा नगरबासीलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
बेदकोट नगरपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकहरुले कोरोना रोकथामका लागि हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ, त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । म आफै पनि संक्रमित भए त्यस अवधिमा आफै खटिन पाइन, त्यसका लागि क्षमाप्राथी छु । बेदकोटले १२ जना नागरिकलाई कोभिडका कारण गुमाइसकेको छ । उहाँहरुको परिवारप्रति समबेदना व्यक्त गर्न चाहान्छु । हामी सबैले लकडाउनको पालना गरेर स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्यौ भने कोरोनालाई परास्त गर्ने छौं । सबैको प्रयासबाट हामीले जित्नु पर्छ । हामी जित्ने छौं ।
१३ जेठ २०७८, बिहीवार १९:११ बजे प्रकाशित
सुदूरपश्चिमका तीन मन्त्रीलाई एमालेको २४ घण्टे स्पष्टीकरण
बसपार्कमा एक जना सुतेको अवस्थामा मृत फेला
सरकारले भनोस्, जनतालाई भ्याक्सिन लगाएर देखाउँछौं : अध्यक्ष साउँद
मोबाइल नम्बरसमेत राखेर बिरामीको अवस्था बुझिरहेका छौं : अध्यक्ष गड्सिला
महामारीमा पुनर्बास : ‘वडा–वडामा निगरानी समूह परिचालित छन्’
खरिद प्रक्रियालगायतका कारण समयमा काम गर्न सकेनौं : मन्त्री सुबेदी
कोरोना महामारीमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोग पाइएन : नगरप्रमुख चन्द
स्वास्थ्य समस्या देखिए घरमै गएर सेवा दिइरहेका छौं : नगरप्रमुख ओझा